Gawaarida Guriga ee TOGG Dhammaan faahfaahinta laga werwero | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara41 KocaeliFaahfaahinta oo dhan ayaa ka walaacsan Gawaarida Guryaha TOGG
28 / 12 / 2019 41 Kocaeli, SAWIRADA, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, Gobolka Marmara, baabuurta, TURKEY
dhammaan faahfaahinta ku saabsan baabuurta guryaha
TOGG, markii 2022 sano ee modelipazar C-SUV inuu yimaado, European classical olmayandoğuş kii korontada marka hore SUV olacak.türkiye korontada dhalashada ugu horeysay, eber-hawada iyo in la soo saari doonaa sida baabuurta smart model C-SUV, dheer wheelbase iyo sidoo kale fasalka kowaad, mugga gudaha ee ugu weyn, waxqabadka dardargelinta ugu wanaagsan iyo qiimaha wadarta guud ee lahaanshaha ayaa ka hor mari doona tartamayaasha.
Fikradaha macaamiisha Turkiga ayaa hogaaminaya qaabeynta
TOGG by injineerada iyo samaynta, xuquuqda hantida aqooneed iyo warshadaha, taas oo la horumariyo on 100 boqolkiiba Turkey si ay awood u dhalin baabuurta boosteejo baabuurta qaybsan in Turkey ay soo rogeen, dhulka cusub ayuu kala jejebiyey geedi socodka design ka.
oo qayb ka ah geedi socodka design ka Turkey iyo guud ahaan 18 Guryo design ka adduunka oo dhan, iyadoo 6 shuruudaha kala duwan, si loo garto tOGGer qaaday in qiimeyn Ujeedada. Kooxda Naqshadeynta TOGG, oo ay ku jiraan Murat Günak, waxay gaareen go'aanka ah inay sii wadaan howsha iyagoo wata 3 guri oo naqshad ah oo leh dhibcaha ugu badan. Turkey bilaabay qaadashada dabeecadaha iibsado baabuur ka dhigay in dalka la talooyin tacsida diyaariyey iyadoo la raacayo natiijada cilmi waxa lala wadaagaa, kuwaas oo guriga design 3-cabbir nidaamka tartanka 2 design si loo ogaado design ee gaariga.
Tartankan ayaa loo soo agaasimey 4 marxaladood waxaana uu socday 6 bilood.
Muddadan, in kabadan 100 mowduuc oo kaladuwan ayaa la qiimeeyay waxaana laga filaayay go'aammada ku sahabsan cilmi baarista macmiilka in lasiiyay guryaha naqshadeynta. Marka geeddi-socodka dibadda ka ahaa guri kasta oo design shaqada design gudaha dhameystirtay iyo imtixaannay tacsida ee Turkey. Natiijadan waxaa sidoo kale qiimeeyay kooxda TOGGDesign oo ku saabsan ku habboonaanta warshadeed. Marxaladahaas ka dib, Pininfarin design design, oo ah midka adduunka ugu wanaagsan, waxaa loo xushay inuu yahay shuraako ganacsi isla markaana wejigii naqshadeynta 3D ayaa la bilaabay.
Baabuur lagu faani karo in la haysto
In line natiijada aragtiyo macaamiisha TOGG Turkish ka ah dadaalka wadajirka ah ee kooxda design inay qaabeeyaan guryaha vepininfar ma aha oo kaliya dalka Turkiga, luqad naqshad asal ah oo lagu farxi doono juquraafiyo kala duwan oo adduunka ah.
Dazzling, Design Original iyo Casri Dibadeed
Naqshadeynta ayaa la sameeyay oo lagu sameeyay 3D. Khadadka kaladuwan iyo fiiqan ee naqshadaha dibadda ee SUV iyo fikradaha Sedan waxay muujinayaan dabeecadda adag ee kartida gawaarida, isla mar ahaantaana naqshadeeya naqshada DNA ee badeecada oo balaarin doonta sanadaha soo socda.
The khadadka fiiqan ee lagu daydo SUV, laga bilaabo dhinaca hore iyo gadaal design caatada ah oo muujinaya in la sii wado la barwaaqaysan nolosha iyo helidda la khadadka cad ee asalka gaari Turkey iyo ku darayaa eegno casriga ah. Faahfaahinta qalabka indhaha ee muuqaalka ah ee chrom-ga ee qaabeeya wajiga hore ee cajiibka ah ee soo jiida dhammaan muuqaalka grille iyo nalka kooxda nalka wuxuu dhameystiraa muuqaalka gaariga, isagoo bixinaya sii wadida dhinaca iyo qaabeynta dambe.
Dhaqanka Dhulkan Naqshadeeyay
baabuur Turkiga, kaas oo ahaa mid la waxyooday by Tulip waa mid ka mid ah ragga calanka u design casriga ah iyo asalka rujin in carradu of Anatolia. Gawaarida hore ee gaariga ayaa loo arkaa inuu yahay saxeexa wadada, oo ay ku dhameystiran yihiin giraangiro xarrago leh iyo faahfaahinta gudaha oo leh tirooyin qurux badan oo tulip qurux badan leh, waxay xoojineysaa isku xirka hiddaha hiddaha iyo dhaqanka ee taariikhdeena Seljuk.
Mid fudud, Gudaha iyo Teknolojiyad Gudaha ah
Iyada oo leh xariiqyadeeda fiiqan iyo khadadka dibedda ee qulqulaya, gudaha ee gaarigu wuxuu ku soo dhaweynayaa adeegsadeyaasheeda leh qalab taxaddar leh oo tayo leh, tayo sare leh iyo farsamo sare.
Shaashadda macluumaadka macluumaadka dhijitaalka ah, oo ku wada rakaab dhammaan rakaabka darawalka, waxay bixisaa labadaba si sahlan ula socoshada macluumaadka iyo aragtida waxyaabaha rakaabka-gaarka u ah. Muujinaya tikniyoolajiyadda hore ee gawaarida oo ay ku fududaanayso qaabeynta gudaha, shaashadu waxay taageertaa isu beddelka gaariga sinu goob caqli badan.
Ortakonsol wuxuu u taagan yahay mid ka mid ah qaababka ugu muhiimsan iyo astaamaha shaqada ee gaariga gudaha. Iyada oo laga fogaanayo geesaha iyo bareega baarkinka elektiroonigga ah ee foomka xusuusinaya diyaaradda diyaaradda, qalabka kooneyda wuxuu kaloo gacan ka geystaa xakameynta shaashadda taabashada taabashada iyo qaladka. iyo naqshad fudud. gaari Turkiga, technology waxay cadeyneysaa in hab design this ayaa sidoo kale waxaa lagu siin karaa technology sare oo aan isku daraa adag xarrago.
Meelo Fiican oo Fiican
baabuurta ee Turkey meel nololeed cusub u soo jeestay, fasalka C-SUV la dhidibka dheer oo ka mid ah faa'iidoyinka aileyirahat 5-qof oo si raaxo leh iyada oo lugta ugu dheer ee headroom sare iyo fasalka ee ağırlayacak.kab siin raaxada ee fasalka sare Gudaha iyo waasacyada gudaha waxay ku siin doonaan raaxo aan laqaraneyn iyo rayn rayn safarka dheer.
Gebi ahaanba cusub, madal baabuurta casriga korantada leh
Waxaan ku qeexaynaa gebi ahaanba gawaarida cusub ee korantada gawaarida korantada oo bixin doonta kaabayaasha dhammaan noocyada gawaarida TOGG oo leh seddex cinwaan oo waaweyn:
1. Asalka ah
Farsamo-sare, koronto gudaha ku shaqeeya iyo meel kuxiran, oo si buuxda u soo saartay injineerada TOGG, oo aan laheyn xuquuq aqooneed iyo xuquuq warshadeed oo leh 100% TOGG.
Bixinta wax ku oolnimada ugu sareysa, raaxada, cimri dheeri iyo shuruudaha amniga wadajirka; qaab dhismeed casri ah oo u oggolaanaya ballac iyo dherer kala duwan.
3. Ka baxsan
Dhismaha guud ee ballaarinta, ballaarinta iyo raaxada ee nolosha bannaan ee baabuurka iyadoo lasiinayo masaafada ugu dheer ee qotoda dheer fasalkeeda.
Khibradda wadista korantada
boosteejo baabuurta korontada iyo powertrain Turkey ayaa mahad dhalin si loo yareeyo kharashka guud ee baabuurta sari gudaha sida uu milkiilaha, dalabyo ka aamusan iyo kortaan more wacan.
baabuur Turkiga, kaabayaasha a xukun dhamaystiran iyada oo guriga in ay kor u bixiyaan si tOGGer öncülüğündeyayılım 2022 iman doonaa wadada, ku amraya saldhigyada on xafiisyada iyo edilebilecek.bağlantıl wadada iyo smart in gaariga olmanınsun la awoodaha farsamada users şarjınıkolaylıkl maamuli kartaa si ay u qorsheeyaan ay gaariga.
Range ka badan 500 Kiiloomitir
Isticmaalayaashu waxay awood u yeelan doonaan inay ka doortaan 2 noocyo kala duwan oo kala duwan oo ay ku bixiyaan tamar batari Lithium-ion tamar badan leh. baabuur Turkiga, 300 + km. ama 500 + km. kala duwan ayaa bixin doona 2 ikhtiyaar oo batari ah oo kala duwan waxayna u oggolaan doontaa dadka isticmaala inay habeeyaan gawaaridooda iyaga oo dooranaya kuwa ugu habboon iyaga.
Kicitaanka soonka in ka yar 30 daqiiqo
baabuur Turkey ayaa si degdeg ah ku amraya oo leh 30 daqiiqo waqtiga gaaban by ulaşabilecek.böyle 80% heerka pildoluluk, safra nasasiiyay inta lagu jiro nasasho kafeega gaaban on safar dheer, waxaa diyaar u ah inta kale ee safarka sida baabuurta noqon doonaa.
8 Ogsoonow Batteriga Sanadka
baabuur Turkiga, si ay u Lithium-ra'iyi technology batari sare iyo faa'iidooyinka farsamo keeno nidaamka maamulka kaamerada firfircoon mahad yeelan doonaan pilgarant kalsooni 8 sano ah.
Dhaqaalaha iyo Wacyigalinta Deegaanka
Xaqiiqda ah in gawaarida korantada iyo kuxiran ay leeyihiin nidaam jilicsan marka loo fiiriyo gawaarida gubta gudaha, suurtagalnimada casriyeynta softiweerka internetka iyo suurtagalnimada in loogu diga dadka isticmaala digniinta macluumaad la xiriira arrimaha farsamada waxay yareyn doontaa baahida loo qabo adeegga farsamada / dayactirka.
Si kastaba ha noqotee, qiimaha halkii kiiloomitir wuxuu aad uga yaraan doonaa marka loo eego matoorada gubashada gudaha, taasoo kuxiran baahida tamarta hoose si loo daboolo isla masaafada.
baabuur Turkey ee isku dhafan oo ka mid ah waxyaabaha asaasiga ah, waxay yeelan doonaan faa'iido muhiim ah in kharashka guud ee lahaanshaha. Isla mar ahaantaana, waxay ka mid noqon doontaa gawaarida deegaanka ugu mihiimsan ee sunta gaaska eber waxyeello u geysan.
Dhaqdhaqaaqa Gaari Gaarka ah
technology The motor koronto (E-motor) ka baxsan laga filayo ee dadka isticmaala si ay u waayo-aragnimo sunaraksürüşstandart re tanımlayacak.türkiye ee hal engine email la drive gadaal-wheel koriyo 200 hooras haddii ay doonayaan, dadka isticmaala gaariga (RWD) version, ama bixiya wadar ahaan 400 hooras laba dhan e-engined Nidaamka wadidda-curyaaminta oo dhan (AWD) oo leh laba qalab oo tayo sare leh e-matoorrada hore iyo gadaalba waxay bixin doonaan jihada wanaagsan iyo waxqabadka sare ee cimilada adag iyo xaaladaha waddooyinka.
Ku yaal madax bannaan Turkiga Macpherson raaga oo dariiq dhexaad hore iyo gaariga loo adeegsaday ee dariiq dhexaad ka gadaal la si buuxda u madax banaan dhafan hakaga nidaamka ganaax iyo dareenka driving firfircoon, in maaraysay fiican iyo raaxada wadista noqon doonaa gacanta ku haboon dheelitirka user ee.
Waxqabadka aan La Sheegin Iyadoo Dardargelinta 4.8-0 Km / H ee 100 Sekan
baabuur Turkiga, nidaamka drive dardargelinta labadaba si ay u bixiyaan waayo-aragnimo u gaar ah. Gaadhigu wuxuu xawaareyn doonaa 0 illaa 100km / saac 200 sekan ilbiriqsi oo ah 7,6 oo mashiin xoog loo adeegsado iyo 400 ilbiriqsi oo ah mashiinka awooda 4,8 oo fardaha si loo gaarsiiyo waxqabadka xawaaraha aan xasiloonayn aamusnaan iyo keyd tamarta.
users gaari Turkey ee la kaabayaasha raagaya iyo adag si ay u taageeraan nidaamka ammaanka sare u dhimin amaanka wadista, yolculuklarınkeyf doonaa si ammaan ah.
Iyadoo meelaynta dhafan ee pack batteriga si madal rigidity torsional gaariga ee, kaas oo ku siin doona koror 30% ah iyo gawaarida sare iska caabin saameyn ku Turkey, dadban ku jira airbags olaraksunacağı7 caadiga ah, hore channel hawada iyo taageero nidaamka ammaanka firfircoon oo dhamaystiran la cajaladood oo kala jejebiyey gadaal wada yihiin ammaan xaalad wadada kasta bixin doonaa fuulitaan.
Thanks to dhamaan qodobbada badbaadada iyo nidaamyada caawinta darawalka sare, EuroNCAP waxay la kulmi doontaa shuruucda amniga ee 2022 Star ee 5 marka ay wadada soo galeyso.
Nidaamyada Taakuleynta Darawalka Lagu Cusbooneysiin karo Internetka
Turkey si ay nidaamka gargaarka darawalka sare, oo ay ku jiraan auto feature pilot of gaadiidka magaalooyinka "Heerka 2+" mahad driving goboleedka yeelan doontaa awood u leh inay culeyska ka isticmaala iyo gaadiidka.
Gawaarida waxaa lagu qalabeysan doonaa kaabayaal diyaarsan oo ku haboon "Heerka 3 iyo wixii ka dambeeya" isbadallada wadista gawaarida iyagoo uga mahadcelinaya qaab dhismeedka joogtada ah ee la casriyeeyay oo ay sameeyeen injineerada TOGG.
In kabadan baabuur: goobta cusub ee caqliga leh
Iyada oo leh teknolojiyad caqli badan oo soo bandhigaysa wax ka badan hal baabuur, gaariga ayaa noqonaya meel saddexaad oo ku noolaanshaha guriga iyo shaqada kadib.
kaabayaasha otomobilibağlantıl joogto Turkey ee ka dhici doona internet-ka, in aadan u baahan doontaa qalab gaar ah in ay ku xidhmaan internetka. Gaarigu wuxuu la xiriiri doonaa dhamaan kaabayaasha magaalada ee caqliga leh, korantada korantada, aaladaha, guryaha iyo dhismayaasha wuxuuna noqon doonaa kaaliye fakir dhinacyo badan oo nolosha ah. Sannadaha soo socda, gaar ahaan faafidda tikniyoolajiyada 5G, gawaarida ku xidhan waxay noqon doonaan xudunta nolosha caqliga leh iyo adeegyo cusub oo ka soo bixi doona gudaha dhaqdhaqaaqa deegaanka waxay bixin doonaan khibrad dhaqdhaqaaq oo ka duwan oo ku kordhinaysa qiimaha oo u sahlaysa adeegsadayaasha.
Khibrad ka duwan tii teknolojiyad wax dumisa
baabuur Turkiga, korontada oo keliya, iyo waxa aan la xidhiidha in la noqdo smart, waxay leeyihiin lahaa in uu noqdo users la teknoolajiyada cusub iyo carqalad ujeedadoodu tahay in ay u guuraan khibrad gaari size a kala duwan.
TOGG jihada this, ugu horeysay in la keeno dalka Turkiga gaariga dunida "kaaliyaha Holographic" technology sii wadaan in ay u diyaar garoobaan. Kaaliyahaan hal-abuurka leh ayaa ka faa'iideysan doonta algorithms-ka isha sare ku haya iyo teknolojiyada sawirka saddex-cabbirka leh si loo siiyo khibrad isticmaale oo ka fog dashboard-ka caadiga ah ee caadiga ah. Tikniyoolajiyadda “Holographic Assistance” waxay khibradda gudaha baabuurka u keeni doontaa cabbirka xiga marka ugu horeysa iyaga oo ku beddelaya teknoolojiyadda muujinta-laba-geesoodka ah ee loo isticmaalo baabuurka iyada oo leh muuqaal saddex-geesood leh iyo xaqiiqada kor loo qaaday.
Thanks to this technology, darawalka ma arki doono oo keliya macluumaadka lagu bixiyo shaashadda gaariga isagoo aan indhaha ka qaadin wadada, laakiin wuxuu kaloo marin u heli doonaa dhammaan macluumaadka kale ee laga yaabo inuu uga baahan yahay wadada iyo deegaanka. waxaad ka heli doontaa wadis raaxo leh iyo is-dhexgal leh.
TOGG waxay higsaneysaa inay noqoto shirkada ugu horeysa dhaqdhaqaaqa ee warshadaha gawaarida si ay u siiso macaamiishan khibradahan wadista ah.
Faahfaahin aad u khaas ah oo laga helayo Mashruuca Marmaray
baabuur caqli badan
Dane Mccarty ayuu yiri:
Waxaan rabaa inaan iibsado mid ka mid ah. Waxay umuuqataa inay sameyn doonto guul weyn.